Ikhaya / Blog / Isitayela se-4.95m2 saseScandinavia, eli gumbi lokuhlambela labaselula liMangalisa ngakumbi kuneGumbi lokuPhila!
2020 / 10 / 15 uhleloBlog 1027 0
I-Ou Xiaowei iSikolo soShishino lweGumbi lokuhlambela
Ikhaya kulapho sithanda ukuba ngabethu, kunye nesona sithandwa sisondeleyo, abazali abathandekayo, kunye nabantwana abathandekayo. Ekhaya, hayi kuphela ixabiso lefashoni, kodwa kunye nobushushu.
Ityala lesiqhelo lanamhlanje malunga nabanini bamakhaya abahlala eQuanzhou, abanencasa eyahlukileyo kwifashoni, njengoyilo olwenzelwe wena, kwaye baneemfuno eziphezulu zokugcina indawo yangasese.
Ngokwemeko eyiyo kunye neemfuno zabanini, umyili uPeng Huiyan ovela eQuanzhou ukhethe ngokukodwa uthotho lweSanta Monica olulungele iintsapho ezisencinci kunye nefashoni ukuyila.
Ummandla: Kelleixiang Villa
Indawo: malunga ne-4.95m2
Ubeko: Ubume obunemilo ye-U
Iindawo ezisebenzayo: Indawo yokuhlamba, indawo yokuhlamba, indawo elula
Umyili, uPeng, uyilelwe ngumxholo wokutsha kweScandinavia othandwayo ngoku. Isikimu sombala waseMorandi, ukugcwala okuphantsi kolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka, ngwevu elunxwemeni, ukuzola kunye nokuthamba. Imigca elula yeepaneli zeminyango inika indawo ngakumbi kubuntu obunzima.
Ukhetho lodonga yithayile yesikwere emhlophe encinci, kunye neethayile ezifudumeleyo zeethowuni etyheli ezishushu ngakumbi, kwaye emva koko iminyaka eli-10 ayiphelelwa lixesha ngokulula.
Indawo yokuhlamba usebenzisa Isibuko sekhabhathi + yokuxhoma ikhabhathi yomgangatho + ukudibanisa okuphezulu kwekhabinethi, indawo efanelekileyo yokwakha icala langasese eliphezulu kwikhabhathi ephezulu + yokudibanisa ikhabinethi edibeneyo, yonke indibaniselwano yokwamkelwa kwigumbi lokuhlambela ukuphucula ngaphezulu kwe-50%, ukuze usapho luphela lube nendawo yokubeka izinto zokuhlambela.
1, Indawo yokuhlamba
Kumamkeli-zindwendwe onobunkunkqele, angabikho njani ngaphandle kolusu olwahlukeneyo kunye neemveliso zobuhle. Umyili uPeng wandise umthamo wesipili kwaye yenze ikhabhathi esonga isibuko emnyango ukugcina ulusu kunye nolusu lweemveliso. Umlingo wothixokazi uqala ngezinto zangasese zemihla ngemihla kunye nolusu.
(Ingqokelela yeSanta Monica PLWY19064)
Uyilo olucekeceke lwe-basin isitya setafile ngombhobho omnyama, Isikimu sombala omnyama nomhlophe sesona sodidi, soze saphuma kwifashoni. Ixabiso lombala eliphezulu lesitya seqonga, vumela yonke imiphezulu yeetafile imise ngakumbi incasa yobugcisa, ingqiqo ephezulu igcwele. Isitya sokubaleka kulula ukusifaka, kwaye kulunge kakhulu ukubuyisela isitayile kamva.
(Uthotho lweSanta Monica PLWY19064)
Isinyithi esimnyama ngumnatha oshushu kule minyaka imbalwa idlulileyo, kwaye ngokuqinisekileyo ikhaya elinesitayile alinakubakho ngaphandle kokuhonjiswa kwalo. Cwangcisa phantsi kwesibuko sekhabhathi matte emnyama yentsimbi, ukwenza imo yefashoni yesitayile seScandinavia ibonakale.
Ibhokisi yokuxhoma ehambelana nayo iyasuswa kwaye inokuhlengahlengiswa ngokwendlela yesiqhelo yokusetyenziswa komnini, kwaye inokubekwa ngasekhohlo okanye ngasekunene.
Isibuko sijikelezwe yicango elineminyango emibini phakathi kobude obuxhomekeke kwikhabhathi, ezinokubamba inani lezinto kwaye zahlulwe ngaphakathi ngeglasi yokuthambisa, iyenza icoceke kwaye icwangciswe kwaye ilungele umbutho wemihla ngemihla.
UMyili uPeng ukhethe le seti yoyilo lwekhabhathi yegumbi lokuhlambela, hayi kwixabiso lobuso ngaphezulu kokutya kosapho lwefashoni encinci, kwezinye zeenkcukacha zomsebenzi nazo "zilumkile".
Ngaphantsi kwesitya kukho idrowa yokugcina efihlakeleyo, ihlala ibonakala njengekhabhinethi evulekileyo eqhelekileyo, ukuba idrowa iyatsalwa ekugqibeleni, uya kufumana umhlaba omkhulu emva kokudideka, esi sithuba sikulungele ukubeka izinto zabucala.
I-2, iBhaso leNdawo efanelekileyo
Indawo yokuhlambela yesiNtu, ngaphandle koncedo lokungabikho kolunye ugcino lweebhokisi zeethishu, zilula kakhulu kwaye azikho. UMyili uPeng wakha le seti yekhabethe yokugcina ejikeleze indlu yangasese, umthamo omkhulu, uyilo olupheleleyo loyilo, alunako ukugcina kuphela, kodwa ludlala indima yokuhombisa, ukubulala iintaka ezimbini ngelitye elinye.
Ezantsi kwebhodi esecaleni yishelufa evulekileyo emalunga nama-300mm ukuphakama, eyenza kube lula ukufikelela ngaphandle kokuphakamisa kunye nokugoba. Ukongeza kwitawuli zamaphepha, le ndawo inokubamba izinto ezininzi ezinje ngeeselfowuni, amaqhosha, iaromatherapy, kunye nokunye.
Isiqingatha esiphezulu sekhabhinethi evulekile yinto nje ethandwayo yee-hoarders yokugcina izinto ezinjengezixhobo zokubulala iintsholongwane, iitawuli zamaphepha, kunye nokunye.
Njengoninzi lweentsapho eziselula, abanini bagxila kumgangatho wobomi, ke ngoko bakhetha indlu yangasese efanelekileyo. Xa kuthelekiswa nendlu yangasese yendabuko, indlu yangasese ekrelekrele ine isihlalo ukufudumeza, ukuhlamba emva kwendlu yangasese kunye neminye imisebenzi, ukuze inkqubo yangasese kabini intuthuzelo.
3, Indawo yokuHamba ngeMbasa
Zabo ishawa, bakhethe intsimbi emnyama enesitayile kunye neyomeleleyo. Isinyithi esimnyama esimnyama kunye neethayile ezincinci ezimhlophe, inokuba yeyona idibeneyo.
Iintloko zeshawari ezimnyama zithandwa ngakumbi kwiintsapho ezincinci, kwaye umbala omnyama unemvakalelo yokuphambili, unesisa kwaye uhlala ixesha elide, kwaye awuzukujongeka ngathi mdala kangangeminyaka.
Kufuneka sijongane negumbi lokuhlambela yonke imihla, sikhululekile kwaye sifudumele, sinemfashini kwaye sineendawo ezintle, zinokusenza sikhuthaze yonke imihla. Ngaba ukhe washukunyiswa lolu luyilo lwendlu yomnini eKailai Xiang Villa, eQuanzhou?
Ngaphambili :: U-Kohler uthatha iNkampani yokuHlamba eyiSmart eyaziwayo kwiNkundla yokufumana iRandi eyi-1.4 yezigidi next: Ezona ngcebiso ziBalaseleyo kwigumbi lokuhlambela, Zonke zikwindawo enye!